Njikọta Trendyol - Ndị na -akwado E -mbupụ
Nhazi na ịlaghachi azụ
Ahịa Ahịa Europe
ERP / Njikọ Akaụntụ
Gbalịa ya n'efu
Nbanye Malite ugbu a!
Kpọtụrụ anyị: 0 850 532 44 61
Ọ dị mfe ijikwa ndị na -akwado gị jikwaa ụlọ ahịa Trendyol.com gị!
A na -enyocha ebuka niile na akpaghị aka. A na -egosipụta mgbanwe ọnụahịa na ngwaahịa ozugbo
A na -anakọta iwu sitere na Trendyol n'otu ihuenyo yana iwu ndị ọzọ niile.
ụlọ ahịa gị
Ebe E-azụmahịa gị
Mmemme ERP gị
Ngwaahịa na iwu
Ngwaahịa / Iwu Ahịa
Ọ dị mfe ire na Trendyol.com ya na ndị na -akwado ya!
Ị nwere ike bulite ngwaahịa gị na Propars na Excel ma ọ bụ XML.
Ị nwere ike ree ngwaahịa ị gbakwunye na Propars na Trendyol site na iji otu ọpịpị.
Mee nnukwu mmelite na ngwaahịa.
Mepụta akwụkwọ ọnụahịa n'efu maka iwu gị site na ịpị otu ọpịpị
Jikwaa azụmahịa e-commerce na otu ihuenyo yana Mmekọrịta Ọkwa Ahịa
Ntinye ngwa ngwa dị mfe: Ịnwere ike ịgbakwunye ngwaahịa ị gbakwunye na Propars n'ụlọ ahịa gị n'ọma ahịa niile n'otu oge wee mepee ha maka ọrịre.
Mgbanwe ego akpaka: Ị nwere ike ree ngwaahịa gị rere na ego mba ofesi n'ọma ahịa Turkey na TL, ị nwekwara ike ree ngwaahịa gị na TL na mba dị iche iche nwere ọnụego mgbanwe dị iche iche.
Mmelite ngwa ngwa na mmelite ọnụahịa: Ị nwere ike lelee ụlọ ahịa gị na ụlọ ahịa anụ ahụ ozugbo na saịtị e-commerce kachasị n'ụwa, Amazon, eBay na Etsy. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, mgbe ị na -ere ngwaahịa na Propars n'ụlọ ahịa anụ ahụ gị ma ngwaahịa ahụ agwụla, a na -emechi ngwaahịa ahụ na -akpaghị aka maka ọrịre na ụlọ ahịa dị na Amazon France n'otu oge.
Ahịa ndị ọzọ: A na -agbakwụnye n'ọma ahịa ahịa na Turkey na n'ọma ahịa ụwa, Propars, na mba ọhụrụ.
Ugbu: Ndị na -emepụta ihe na -esochi ihe ọhụrụ e mere n'ọma ahịa ma tinye ya na Propars.
Ọnụahịa ọtụtụ: Site na ịmepụta otu ọnụahịa, ị nwere ike ree ọnụahịa ọ bụla n'ahịa ọ bụla.
Njikwa atụmatụ: Ị nwere ike ijikwa atụmatụ ngwaahịa achọrọ n'ọma ahịa jiri Propars.
Nhọrọ ngwaahịa: Ị nwere ike nyefee nhọrọ ngwaahịa dị ka agba na nha n'ahịa niile site na ịkọwa foto dị iche na ọnụ ahịa dị iche iche.
Propars A na -ajụkarị ajụjụ
Kedu ihe bụ Propars?
Propars bụ mmemme na-eme ka azụmaahịa nwee ike iji azụmaahịa ọ bụla na-azụ ahịa. Ọ na -azọpụta ụlọ ọrụ azụmaahịa site na iji mmemme dị iche iche maka mkpa ha dị iche iche, ma na -azọpụta oge na ego. Ekele ya maka ọtụtụ atụmatụ ya dị ka njikwa ngwaahịa, njikwa akaụntụ, ịtụ na njikwa ndị ahịa, azụmaahịa nwere ike gboo mkpa ha niile n'okpuru otu ụlọ.
Kedu atụmatụ ndị Propars nwere?
Ndị na-akwalite nwere njikwa ngwa ahịa, njikwa ịzụrụ ihe, njikwa akaụntụ, njikwa e-commerce, njikwa iwu, njikwa njikwa ndị ahịa. Edebere modulu ndị a, nke ọ bụla zuru oke, kwekọrọ na mkpa ndị SME.
Kedu ihe njikwa E-Commerce pụtara?
Njikwa e-commerce; Ọ pụtara na ị ruru ọtụtụ nde ndị ahịa nọ na Turkey na ụwa niile site na iweta ngwaahịa ị na -ere na azụmahịa gị na ịntanetị. Ọ bụrụ na ị nwere ndị na-akwado gị, egbula oge, njikwa e-commerce dị mfe na ndị na-akwado ya! Ndị na-akwalite akpaaka na-eme ka ọtụtụ usoro dị mkpa na-enyere gị aka ime nke ọma na azụmahịa e-commerce.
Kedu ọwa azụmahịa e-commerce nke ngwaahịa m ga-ere na Propars?
N'ime nnukwu ahịa dijitalụ ebe ọtụtụ ndị na -ere ahịa dị ka N11, Gittigidiyor, Trendyol, Hepsiburada, Ebay, Amazon na Etsy na -ere ngwaahịa ha, Propars na -etinye ngwaahịa ahụ na -akpaghị aka site na iji otu ọpịpị.
Kedu otu m ga -esi nyefee ngwaahịa m na ndị na -akwado ya?
Ka ngwaahịa gị wee na -ere ere n'ọtụtụ ahịa ịntanetị, ọ ga -ezuru ịnyefe ha na Propars naanị otu ugboro. Maka nke a, obere azụmaahịa nwere ọnụ ọgụgụ dị nta nke ngwaahịa nwere ike banye ngwa ahịa ha ngwa ngwa site na iji modulu Njikwa Ngwaahịa nke ndị na -akwalite. Ndị ọchụnta ego nwere ọtụtụ ngwaahịa nwere ike bulite faịlụ XML nwere ozi ngwaahịa na Propars ma nyefee puku kwuru puku ngwaahịa na Propars n'ime sekọnd ole na ole.
Kedu ka m ga -esi malite iji Propars?
Ị nwere ike ịrịọ nnwale n'efu site na ịpị bọtịnụ 'Gbalịa n'efu' na akuku aka nri elu nke ibe ọ bụla wee dejupụta fọm mepere emepe. Mgbe arịrịọ gị ruru gị, onye nnọchi anya Propars ga -akpọ gị ozugbo wee malite iji Propars n'efu.
Azụrụ m otu ngwugwu, enwere m ike ịgbanwe ya ma emechaa?
Ee, ị nwere ike ịgbanwee n'etiti ngwugwu n'oge ọ bụla. Iji kwado mkpa azụmahịa gị na -agbanwe agbanwe, kpọọ naanị ndị na -akwalite ya!
Ree N'ụwa niile Nwetakwuo!
Site na ndị na -akwalite, malite ire site na ịpị n'otu ọwa ahịa ụwa niile dịka Amazon, Ebay na Etsy!
Malite ugbu a
Jikwaa iwu site n'otu ihuenyo
Chịkọta iwu gị niile n'otu ihuenyo, akwụkwọ ọnụahịa nwere otu ọpịpị! Ọ nwere ike nye akwụkwọ ọnụahịa e-akwụkwọ n'uju maka iwu na-esite n'ahịa ahịa na saịtị e-commerce nke gị; Ị nwere ike bipụta ụdị ibu ibu.
Site na ibugote ngwaahịa gị na Propars naanị otu ugboro, ị nwere ike ree ya na saịtị niile site na iji otu ọpịpị.
Ị gaghị echegbu onwe gị maka ikenye iche maka ngwaahịa ọ bụla. A ga -ere puku kwuru puku ngwaahịa n'ime sekọnd ole na ole n'ụlọ ahịa ị họrọ.
Enweghị ike ikpebi?
Ka anyị nyere gị aka ikpebi.
Biko kpọọ onye nnọchi anya ndị ahịa anyị gbasara ngwugwu anyị.
Ndị na-akwadebe bụ naanị Turkey na ụzọ izizi E-EXPORT ụwa. Ọ bụ onye mmekọ na -eweta ọrụ Amazon, Ebay, Etsy na Payooner. Ndị KOSGEB na Türk Telekom na -akwado ya.
Pa 2020 Ndị na -akwado ya. Ikike niile echekwabara.
Amazon nke Europe
Ebe e-commerce gị
ndị na -akwado ya
nkwekọrịta onye ọrụ
Iwu nchekwa na nhazi data nkeonwe
Ịkwụ Ụgwọ ugbu a
ihe m chọrọ
-elekọta mmadụ Media
Ndị mmekọ azụmahịa anyị
e-akwụkwọ ọnụahịa & e-Archive